ပုရိသတွေ နှလုံးခုန်ရပ်တန့် သွားစေလောက်တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စားအကြမ်းစားဗီဒီယို(VIDEO) – Zartiman
ပုရိသတွေ နှလုံးခုန်ရပ်တန့် သွားစေလောက်တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စားအကြမ်းစားဗီဒီယို(VIDEO)
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင် လည်း မမှား ပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေးတွေ ပေးနေခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ “မွေစံချစ်တဲ့ ကိုကိုတို့ မွေစံရဲ့ tiktok video တွေ ပုံတွေကို ကြိုက်ကြရဲ့လား။
မွေစံကတော့ အခုတလော နာမည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနော် . .ချစ်ရတဲ့ Fan” ဆိုပြီး အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင် လေးတစ်ခုကို တင်းပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် သူမရဲ့ အသည်းယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ် တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိအောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင် လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက် ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားပါတယ်။
အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျလျနနျးမှစေံကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဆို ရငျ လညျး မမှား ပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပျေါလှငျနပွေီး အမိုကျစား ပိုဈ့လေးတှေ ပေးနခေဲ့ပါတယျ။သူမကတော့ “မှစေံခဈြတဲ့ ကိုကိုတို့ မှစေံရဲ့ tiktok video တှေ ပုံတှကေို ကွိုကျကွရဲ့လား။
မှစေံကတော့ အခုတလော နာမညျအရမျးကွီးနတေဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနျော . .ခဈြရတဲ့ Fan” ဆိုပွီး အမိုကျစား ဗီဒီယိုဖိုငျ လေးတဈခုကို တငျးပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ သူမရဲ့ အသညျးယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြ တှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။နနျးမှစေံ ကတော့ လကျရှိအောငျမွငျလကျြရှိနတေဲ့ မျောဒယျလျ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနကော ကွျောငွာတှကေိုလညျး ရိုကျကူးလကျြရှိနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစားဖကျရှငျ လေးတှကေို ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုရော ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုကိုပါ အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျလျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
လူအမြားနဲ့ ဆကျဆံတဲ့နရောမှာ သငျ့ကို လကျခံဖို့ ခဈြခငျဖို့ ဆိုတာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ- မလိုအပျဘူးထငျပွီး သငျ့ ရဲ့ဆကျဆံပုံ ဆကျ ဆံနညျး လှဲမှားသှားခဲ့ရငျတော့ သငျ မိတျပကျြပါပွီ- ဒါကွောငျ့ ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျပါ။အမိုကျစား ပုံရိပျလေး တှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျစာမကျြနှာထကျ တငျပေးလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားပါတယျ။
ချပ်ရပ်နေတဲ့ အသားကပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျနေတဲ့ “စံရတီမိုးမြင့်”
ဖြူဖြူထွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမနာလိုဖြစ်စရာလားဆိုပြီး ဒဲ့လာရှင်းဖို့ စိန်ခေါ် လိုက်တဲ့ မင်းခန့်ကျော်(ရုပ်/သံ)
အားကစား ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှပေါ်လွင်နေတဲ့ မေဘရဏီစံ